जापानले झण्डै ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने : कुन-कुन कामकाे लागि जान पाइन्छ र कसरी ? « NBC KHABAR
जापानले झण्डै ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने : कुन-कुन कामकाे लागि जान पाइन्छ र कसरी ?
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्यकाे रूपमा हेरीएकाे मुलुक जापानले नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लैजाने भएकाे छ । जापान सरकारले मंगलबार विदेशी कामदारका लागि १२६ वटा मापदण्ड तय गरेसँगै ९ देशबाट विदेशी कामदार लैजाने भएकाे हाे ।
विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बारम्बार छलफल भएको थियो।